Qaybta 1. Sidee loo nadiifiyaa ah Screen iPad
Tan iyo iPad ayaa shaashad jilicsan iyo ku tumashada waxa ay leedahay in mar walba la taabtay si ay ula falgalaan la, waxa uu noqonayaa mid muhiim ah in ay is ogow darafkeeda marka ay timaado nadiifinta shaashadda iyada oo aan wax dhaawac.
Si aad u nadiifiso screen ee iPad, WAA INAAD:
• Gebi dami aad iPad.
• Hel kabuufi yar buugga hawada (wax la mid ah khad-dhibicleeyaha).
• Hel maro marada-free jilicsan ama maro microfiber oo la geeyey oo ay la socdaan iPad laftiisa ah.
Si looga fogaado wax kasta oo waxyeelo ama kediska ee aad iPad, ma aha inaad :
• Isticmaal wax kasta oo wax adag ama hadal haynta sida daawada tuwaalka warqada ah, shukumaan maro, iwm
• Isticmaal xal kasta oo ay adag tahay sida nadiifiye uu furmo suuqa, khamriga, ammonia, iwm
• Nadiifi screen iPad ah marka lagu soo bandhigeen wax ama qalab la shaqeeya iyo ordaya.
Marka aad xaqiijiyay in dhammaan qodobada kor ku xusan, hannaanka nadiifinta screen iPad hoos ku siiyo la raaco kartaa:
Hubi in iPad uu dansan yahay.
Isticmaal hawo si ay u soo afuufi doonaa wixii qurubyada boodhka (ama burbur) ka shaashadda si looga fogaado xagashada kasta oo dhici kara halka xoqeen.
Hel maro marada-free jilicsan (ama maro microfiber ah) wax yar qoyan.
Bilow ku xoqeen ayay maro qoyan si tartiib ah shaashadda dhaqaaq wareeg ah.
Fiiro Gaar ah: waxaa laga yaabaa in aad dooneyso in ay ku soo celiyaan habka xoqa ay marar badan ilaa shaashadda helo si buuxda u nadiif ah.
MUHIIM: Haddii ay dhacdo in mashaqada kasta (sida haddii dhibcood oo qaar ka mid ah oo biyo ah ama xal kasta oo kale galaan mid ka mid ah iridda iPad ah), waa in aad tagtaa Service Apple Xarunta ama Apple Tafaariiqda Store kuugu dhow xaafada aad degan tahay si degdeg ah.
Qaybta 2. Sidee loo nadiifiyaa iPad Smart Cover iyo Smart Case
Tan iyo Cover iyo Smart Smart ka Case u iPad ayaa lagu heli karaa laba verities, geeddi-socodka iyaga nadiifinta ka duwan oo labada geedi socodka waxaa hoos ku siiyey;
Nadiifinta ah polyurethane Smart Cover / Case Smart:
IPad ee ka / kiiska dabool saar.
Hel maro marada-free jilicsan qoyan.
Si tartiib ah u tirtiri aagga hore iyo gudaha ah / kiiska dabool maro qoyan ah oo marada-free jilicsan ka.
Haddii meelaha kiiska / daboolka wali qoyan yihiin, inay sugaan ilaa ay hesho si buuxda qalalan.
IPad ku soo laabtay / kiiska daboolka Saar marka loo sameeyo.
Nadiifinta Leather ah Smart Cover / Case Smart:
Hel maro jilicsan oo nadiif ah hore utaagnaan ay biyo diirran iyo qaar ka mid ah gacanta lagu saabuun codsatay ku yaal.
Maqaar maro nadiifi.
Hel maro jilicsan qoyan marada-free.
Si tartiib ah u tirtiri hore iyo gudaha kiiska / daboolka maro marada la'aanta ah.
Sug ilaa qoyay oo dhan waxaa ka soo baxay ayaa / kiiska daboolka.
IPad ku soo laabtay / kiiska daboolka Saar.
Qaybta 3. Sidee loo nadiifiyaa Old iPad
Waxa intaa dheer in lagu nadiifiyo screen iPad iyo cover oo isticmaalaya hababka kor lagu sharaxay, in aad sidoo kale doonayaan in ay nadiifiso ay kaydinta gudaha si ay u isticmaalaan qalab aad si ay u raaxaystaan ​​suurto gal user waayo-aragnimo ugu fiican. Nadiifinta xasuusta gudaha hore iPad ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku kaydiso ka badan (cusub) xogta ku sugan iyo isticmaalaan qalabka sida baahidaada.
Inkasta oo aad nadiifin kartaa xasuus gudaha hore iPad ee gacanta ka qaadaya xogta ay la rabin iyo / ama uninstalling ah barnaamijyadooda la isticmaalin, hawsha noqon kartaa daalin, waqtiga qaadashada, iyo mararka qaarkood noqon kartaa adag. Si aad u baabi'iyo arimahan, waxaa lagu talinayaa in aad u tagto app dhinac saddexaad ah oo u fududayn kartaa in aad dhammaan hannaanka nadiifinta xasuusta iPad ee, iyo badbaadin karo lacagta aad hufan oo waqti iyo sidoo.
Marka hadalka ku saabsan app ee nadiifinta hore xasuusta iPad ee, mid ka mid ah ugu wanaagsan ee la heli karo suuqa maanta waa Wondershare SafeEraser.
SafeEraser by Wondershare waa shareware ah in lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah. App wuxuu diyaar u yahay sidii version maxkamad dadka isticmaala Windows ah iyo mar la helay ool ah, waxa laga iibsan karaa goobta iibiya ee u bixinta liisanka online.
Wondershare SafeEraser waa ay Gordhaw Kadhoofaan users oo awood u tirtiro xogta la rabin sida macluumaadka shakhsiga ah, la isticmaalin / barnaamijyadooda la rabin, tirtiray files, iwm Intaa waxaa dheer in ay ka saareen xogta ka iPads ah, SafeEraser sidoo kale kaa caawin karaan dadka isticmaala helaan meel lagu kaydiyo badan compressing photos in ay ku kaydsan yihiin ee xasuusta qalabka '.
A muuqaalada muhiim ah in Wondershare dalabyo SafeEraser ka mid ah:
• U muuji Nadiifinta - Si aad u qabtaan nadiifinta deg deg ah oo ku saabsan qalab macruufka ah.
• Photo hawadda - Si aad u cadaadin iyo in la yareeyo tirada sanamyada ku kaydsan ee xasuusta. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad si aad u heshid meel dheeraad ah oo lacag la'aan ah oo ku saabsan iPhone / iPad.
• isticmaalin App Eliminator - Si aad u saarto barnaamijyadooda la isticmaalin ka iPhone / iPad si ay aad hesho meel bannaan oo dheeraad ah oo lacag la'aan ah oo ku saabsan qalab aad.
• masixi Data Private - Si aad u saaro xogta gaarka ah oo dhan ka qalab macruufka ah. Laga yaabaa inaad doonayso inaad qabato noocan ah erasure marka aad qorshaynayso in aad gacanta ku dul iPhone ama iPad in qof aan la aqoon.
• masixi tirtiray Files - Si joogto ah loo saaro faylasha tirtiray ka kaydiyo si ay u sameeyaan wax alla wixii iyaga oo aan recoverable.
• masixi All Data - Si wada nadiifsan yahay qalabka ka hor intaadan iibiyo in qof aan la aqoon oo aadan doonayn in ay dib-u-isticmaali.
Si aad u nadiifiso kaydinta hore iPad ee gudaha, waa in aad raacdo tallaabooyinka hoos ku qoran:
Gal aad Windows PC isticmaalaya xisaab maamule kasta.
Download SafeEraser Wondershare ag maraya in http://www.wondershare.com/iphone-data-eraser/guide.html iyo gujinaya ku Isku day Waa Free Windows u button ka dhinaca kore ee midig ee bogga internetka furay.
Marka bixi, double-riix faylka rakibo eedeysanuhu barnaamijka.
Laga soo bilaabo screen firirka soo bandhigay, riix rakib button oo sug ilaa codsiga uu ku rakiban on your computer.
Ka dib markii la rakibey dhamaato, riix Start Hadda button ka screen firirka ugu.
Marka interface barnaamijka muuqataa, xiriiriyaan iPad in PC isticmaalaya cable USB in geeyey weheliyaan waxaa la sugi ilaa iyo qalabka waxa lagu ogaan karaa codsiga.
Fiiro gaar ah: Marka (Haddii) baxdo, u tag iyada oo Support Apple Codsiga saaxir si aad u hesho barnaamijka iyo PC diyaar u ah in la ogaado ay qalab macruufka ah ugu xiran.
Fiiro gaar ah: Haddii aan hore loo sameeyey, download iyo rakibi Lugood aad kombuutarka markii keenay Wondershare SafeEraser. (Waxaad iska indho tiri karno ogaysiinta haddii aad PC Lugood mar hore ayaa lagu rakibay waxa ku jira.)
Ka dib oo dhan ugu horayn gaadmada ah waxaa lagu sameeyey iyo SafeEraser si guul ogaadaa iPad ku xiran, guji doorasho masixi All Data ka qeybta bidix ee interface ka. Fiiro gaar ah: Haddii kale sidoo kale waxaad isticmaali kartaa Photo hawadda , isticmaalin App Eliminator , masixi Private Data , iyo / ama masixi tirtiray Faylal ay qoreysa in ka badan granularly qaado macluumaadka ay u masixi.
Laga soo bilaabo qaybta midig, riix badhanka masixi Haddaba si buuxda u masixi dhammaan xogta ka hore iPad hor inta aanad bilaabin u isticmaalaya sida qalab cusub (ama in ay iibiyaan si ay qof aan la aqoon). Fiiro gaar ah: Haddii aadan horey u soo iibsaday barnaamijka, waxaa lagu soo bandhigi doonaa sanduuqa macluumaad taasoo keentay in aad ku iibsato liisanka aad. Ka dib markii aad soo iibsatay liisanka, nidaamka dalka looga saarayo xogta buuxi lahaa si guul leh.
By socda hababka kor ku siiyo, waxaad ka heli kartaa jir iPad nadiifiyo oo diyaar u ah in loo isticmaalo qalab cusub oo cusub.
> Resource > iPad > Sidee loo nadiifiyaa iPad